I-JMJ Island Hub
Santa Fe, Central Visayas, i-Philippines
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Lorife
I-JMJ Hub itholakala e-Santa Fe.
Le ndlu ingaphakathi kweSanta fe, ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya emakethe yendawo, Isonto, Ibha / Ukuphumula. Isitolo sezinto ezilula, namabhishi anesihlabathi esimhlophe. Ingamukela abantu abangaphezu kuka-20 endaweni yonke.We
khokhisa ama-peso angu-450 ubusuku bonke ngesivakashi esengeziwe, ngemva kwe-
Isivakashi esi-1 ekamelweni ngalinye. Sinikeza umatilasi namalineni aphelele esivakashi esengeziwe. Sinamagumbi okulala angu-2 ane-airconditioning anendlu yokugezela yangasese kanye ne-cable tv. Ukusetshenziswa kwamahhala kwezitsha zasekhishini, sinomnakekeli ozokusiza.
Ithatha kufikela ku-20pax yendawo yonke (ilungele iqembu kanye nokuphumula komndeni). Inkokhelo ka-P350 nge-pax eyengeziwe lapho ungena ekamelweni lethu I-Standard Standard for two. Omatilasi abahlanzeke kahle abambozwe ngelineni ku-sanitize banikezwa isivakashi esengeziwe.
I-JMJ Island Hub ine-ff yokukuhlalisa:
*Amakamelo amabili (2) anomoya opholile ngokuphelele anendlu yangasese yangasese kanye ne-TV enezintambo
*Igumbi labalandeli elilodwa (1) elisezingeni
|Ikhishi eliphefumulelwe esiqhingini elinezitsha eziphelele.
-Izinto zokupheka zingabolekwa futhi zingasebenzisa nesiqandisi ukupholisa ukudla okuthengiwe. Indawo yokosa imibuthano yeqembu ikhona nayo.
Umbhede omkhulu ongu-1, imibhede eyidabuli engu- 4
4.80(49 okushiwo abanye)
4.80 · 49 okushiwo abanye
Sinendawo lokal ngemuva. Yiba nobungane futhi uhlole ukuze ujabulele ukuphila kwesiqhingi...
Ngemibuzo yokuhlala, ungasithumela umlayezo ngale nombolo yokuxhumana 09173200263 /09283862042 (Lorie)
Abasebenzi bethu abathembekile bazokusiza kukho konke ukuhlala esiqhingini.
ULorife Ungumbungazi ovelele